निषेधाज्ञा मै कर उठाउन आतुर आन्तरिक राजश्वले जनतालाइ झुक्याउदै, ठग्दै, कर उठाउदै – Sanghiya Online
Posted on : September 10, 2020 September 10, 2020 - No Comment
कर उठाउनलाइ नेपाल सरकारले कहिले लक् डाउन फिर्ता लिन्छन त कहिले निषेधाज्ञा। तर नेपाल सरकारले आजबाट निषेधाज्ञा किन फिर्ता लियो त ? सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो कर उठाउन। चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद पनि सरकारले कर बुझाउन म्याद थपेनन । ३ हप्ताको बन्दपछि एकै चोटी भदौ २५ गतेबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको सरकारले आज नै कर तिरिसक्नु पर्ने भनेको छ। आजै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु र आजै कर तिरी सक्नु पर्ने सरकारको जनता प्रति कस्तो ब्यबहार हो यो ?
आजै किन खुकुलो बनाएको हो ?
आज एक दिनमा पैसाको उपाय धेरै ब्यबसायीले गर्न सक्दैनन् र भोलिबाट सरकारले निषेधाज्ञामा घर बसेका जनता संग ब्याज उठाउन आजै बाट खुकुलो बनाएको हो। न भए २-४ दिन अगाडी पनि खुकुलो बनाउन सक्थे होला। यो कर पनि जनतालाइ मारमा पारेर कमाउने भाडो जस्तै भएको छ ।
आन्तरिक राजश्व बिभागको दादागिरी
म्याद थप्न कुनै पनि हालतमा नसकिने बताउदै आएको आन्तरिक राजश्व बिभागको वेब साइट आज चलेको छैन। तर आज बिबरण बुझाएन भने भोलि २६ गते बाट जरिवाना र ब्याज लिन बकुला झैँ बिभाग माछाको खोजिमा बसेको छ । जनतालाइ कुनै प्रकारको सुबिधा नदिने आन्तरिक राजश्व बिभागको वेब साइट नचल्नु र जरिवाना लिनु यो कस्तो दादागिरी हो ? यस तर्फ त केपी ओली सरकारको मन्त्रिहरुको ध्यान जानु पर्ने होनी। निषेधाज्ञा खोलेर आजको आजै कर तिर्न भन्ने कम्युनिष्ट सरकारको कमाउने तरिका विश्व मै अनौठो हो।
डा. रामशरण महतलाई लक्षितगरी शक्तिशाली एम्बुस विष्फोट, विपक्षीले गराएको महतको दाबी